Xaflad lagu soo bandhigayay adeegyada IBS oo lagu qabtay UK-Sawirro – Radio Muqdisho
Xaflad lagu soo bandhigayay adeegyada IBS oo lagu qabtay UK-Sawirro
Xaflada ayaa waxaa ka soo qeyb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalkan UK kuwaas oo daneynayay in ay wax ka ogaadaan hanaanka bankigu u shaqeeyo iyo adeegyada uu bixiyo.
Gudoomiyaha baanka Xasan Axmed Yusuuf ayaa dadkii xaflada ka soo qeyb galay faahfaahin ka siiyay shaqada bankiga iyo waxyaabaha uu dalka ku soo kordhiyay.
Xasan Axmed waxaa uu sheegay in baanku ku dhiiraday in uu maalgalin ku sameeyo Soomaaliya gaar ahaan muqdisho taas dadka qaar u arkayeen meel aan ammaan aheyn balse taasi ay horseeday in shirkadaha caalamku ku baraarugaan horumarka iminka ka hanaqaaday Soomaaliya iyo isbadalka lataaban karo ee ka jira caasimada Muqdisho.
Dadkii goobta ka hadlay ayaa weydiiyay gudoomiyaha su’aalo ku saabsan hanaanka lacag dirid iyo maal galinta bankigu siinayo dadka doonaya in dalka dib u dhistaan ganacsina ka sameystaan.
Gudoomiyaha oo ka jawaabayay su’aalahii la weydiiyay ayaa sheegay in baanku sahlayo in dadka ku nool dibada ee ehelkoodu jooga dalka ay si sahlan lacagaha ugu diri kaaraan.
Dhanka maalgalintu waxa uu sheegay in baanka oo dhawaan la u dbay uu kaalin weyn horumarinta dalka gaar wax soo saarka sida Xoolaha, Kaluumeysiga iyo Beeraha.
Hibaaq Jaamac oo ah gabar Soomaaliyeed kana tirsan dowlada hoose Bristol oo xaflada ka hadashay ayaa sheegtay in ay tahay talaabo wanaagsan oo dhinaca horumarka loo qaaday in xiligan dalka Soomaaliya laga hirgaliyo baan caalami ah kaas oo sababi kara in maal gashiga dalku sahal noqdo.
Bankiga IBS waxaa uu ka mid yahay horumarka dalka ku soo kordhay waxaana maalinba maalinta ka dambeysa soo kordhaya maalgalinta ganacsatada Soomaalida iyo qurbo joogta ay wadanka ku sameysanayaan.
Maamulka Hiiraan oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo qoysaska ka soo laabanaya Yemen
524 guri oo loogu talagalay barakacyaasha oo lagu wareejiyay maamulka Bosaaso